I-Gladiators encinci 2 ikunika amava amahle "eSitrato Sokulwa" I-Androidsis
Ukuba ungumthandi wokulwa imidlalo efana neTekken okanye iStrato Fighter, ngeeGladiator ezincinci 2 unomdlalo wamaxesha amaninzi amnandi. Isihloko esele sithatha impumelelo yaso kwi-Android, sipapashwe kungekudala kwaye besingenakubeka ecaleni ukwenza uphawu lwayo kule migca kwi-Androidsis.
Kwaye inyani yile yokuba ukuba kunjalo idlalwe ngamawakawaka abadlaliKungenxa yomgangatho wayo wobugcisa omkhulu kwaye ngenxa yeempawu ezithile eziqaqanjiswe kakuhle. Siya kuba nakho ukukhetha ukuba sibe neqela lomlo eliza kutshintshiswa ngokweemfuno zomlo; Kananjalo ungabaphucula ngezixhobo ezitsha, izakhono kunye nokunye okuninzi.
1 Umdlalo wokwenyani we-2D
2 Ukuphumelela ihashe kwiiGladiator ezincinci 2
3 Ilinde umxholo ongaphezulu
Umdlalo wokwenyani we-2D
Njengo-Street Fighter 2, ii-Gladiator 2 ezincinci zisekwe kwiimfazwe ezimbini ezibekwe kwicala elinye kwiscreen. Ngamanye amagama, umlo wenzeka kamva ukuze sixhume, sihambe ukusuka ekhohlo ukuya ekunene kwaye sikhulule izakhono zethu kwelona xesha lilungileyo.
Njenge umdlalo weklasikhi ubuyela kwiselfowuni yakho Ngale siphakamiso sikhulu siphuma kwimidlalo yeBoomBit, istudiyo esongamele ukupapashwa kwayo kwiVenkile yeGoogle Play, kwaye, ewe, sele sivuna izibonelelo. Tiny Gladiators 2 isekwe ekuphuculeni abo balwa nathi ukuze sikwazi ukususa onke amaqela e-gladiator aza kuza kuthi.
Inemowudi yebali egqibeleleyo enokuyenza ngomlo, i ukuvula ezo zifuba ukufumana imali kunye nezixhobo, kunye neempawu zomlo ngamnye. Kuba sinazo kwabo benzi bemilingo bodwa kwabo basebenzisa iimela ezimbini, esinye kwisandla ngasinye.
Ukuphumelela ihashe kwiiGladiator ezincinci 2
Ngaphandle kwimo yebali, iiTy Gladiators 2 nazo ikuvumela ukuba ulwe nabanye abadlali kwi-intanethi. Oko kukuthi, kuya kufuneka ubeke iibhetri ukubonisa abanye abadlali ukuba awunakubethwa. Njengoko sifumana uloyiso, sinokufumana iingqekembe zemali ezingakumbi zokuqhubela phambili ngokufanelekileyo kwaye ke sidlulele kwamanye amanqanaba.
Oko kwathethi, yonke loo nto malunga nesifuba, amakhadi kunye nohlaziyo isikhumbuza eminye imidlalo efana neBrawl Stars, Kutshanje kukhutshwe ngu-Supercell kwi-Android. Ke ukuba udlala imidlalo elungileyo kulomdlalo, uya kuziva usekhaya kwesi sihloko se-freemium esinokuthi sichithe amawaka ee-euro ukuba iakhawunti yethu yebhanki iyayixhasa. Oko kukuthi, uya kutshintshiselana ngemali ukuze ube nabalweli abaphambili ngexesha elingaphantsi kunabanye abadlali abaya kufuna ixesha lobomi babo ukufikelela, mhlawumbi, inqanaba lamakhadi.
Sijongene nexesha le-freemium apho la mava emidlalo axhaswayo, ke kuba ayisimangalisi, kodwa siyakulumkisa. Tiny Gladiators 2 ayifumani hype eninzi, kodwa yinto emnandi kwabo "minenga" abalinde umdlalo ohamba phambili wokufumana isipaji sabo.
Ilinde umxholo ongaphezulu
Kwezi ntlobo zemidlalo uhlaziyo luyafuneka rhoqo kwaye zeziphi iindlela ezintsha zomdlalo. Sinemindeni, kodwa ukulwa kwentsapho akusekho. Kwaye mhlawumbi umdlalo weqonga ungaphinda uphindaphinde ngenxa yento yokubetha isikrini ukuze uhambise ukubetha emva komnye. Ukuphumla, umdlalo omkhulu onokudlalwa ukusuka kumzuzu wokuqala.
Ngokobuchwephesha yintsomi. Kwindlela yokusebenza ibalasele nayo kwaye imizobo ibalasele ngabalinganiswa abayilwe kakuhle. Mhlawumbi isilela kwintlantsi yoopopayi, kodwa iziphatha kakuhle ukwenza amava omlo omkhulu; Nangona bekutshiwo apha ngasentla, ukuphindaphinda kancinci ngamanye amaxesha.
Tiny Gladiators 2 ifika ukuba ibe ngumdlalo ongaphaya wokulwa ukuhlonipha i-Tekken kunye ne-Street Fighter 2. Ngoku ukulinda ukuhlaziywa kwabo ubathandayo kwaye bakukhuthaze ukuba uqhubeke nokudlala ngeendlela ezintsha nangakumbi ukuze ube nexesha elimnandi.
Iigladiators ezincinci 2
Ukuphuculwa kwamagorha akho
Ukusilela ukubengezela koopopayi
Amancinci amancinci e-2-Ukulwa iTonamenti
Umthuthukisi: Imidlalo yeBoomBit
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Umdlalo wokwenyani weSitrato sokulwa neTy Gladiators 2
I-beta entsha ye-WhatsApp ifihla ukhetho lokuvula usetyenziso ngeminwe